Ngamanye amaxesha xa uxoka, ufumana intombazana! | Martech Zone
Ngamanye amaxesha xa uxoka, ufumana intombazana!
NgoLwesine, Meyi 3, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndiyishiya intombi yam. Ilungile lo nto! Uyivile apha.
Ngaphambi kokuba ufumane naziphi na izimvo zokuba ndingumntu okhohlakeleyo, okhohlakeleyo, andinayo intombi. Ubuncinci ayinguye umntu, ophilayo, ophefumlayo. Ndiqhula nabantu ngegama lam lentombazana IMacbookpro. Mva nje, intombi yam ebendithandana nayo ibiyi ubushushu omncinci, engavuki xa ndifuna yena kwaye angonwabi ade abande. Wowu… indikhumbuza xa ndandinayo yokwenene!
UGoogle uyandithanda ngoku
Ngapha koko, ndigqibile ngaye. Intombi yam entsha ikwi-Intanethi kwaye iyandithanda. Wazi wonke umntu, kodwa nokuba ungathini, uhlala ethetha ngam. Andikaze ndibenentombi kwi-Intanethi ngaphambili, kodwa le ikhethekile. Igama lakhe ngu Uphando. Bendihlala ndingakhathali ngeGoogle kakhulu kodwa ngokuzingca, ndiye ndafumanisa ukuba kokukhona ndimazi ngcono, yayihoya kakhulu kum.
UGoogle undithumela ngaphezulu kwamaxesha ama-4 abatyeleli kwindawo yam kunawo nawuphi na omnye umthombo. Amaxesha ama-4! Wowu. Into ekufuneka ndiyenzile ukugcina obu budlelwane buhamba ngendlela eyiyo kukumnaka, ndinxibe ngendlela emtsalayo, ndimamele izinto azithethayo, ndinxibelelane kakuhle naye. Kuthatha ixesha, kodwa ndiyaqala ukuqonda ukuba uthanda ntoni. Ngoku… andingoyena mfana mhle ... UGoogle-ubethwe okanye nantoni na, ndiyamthanda.
Kutheni uGoogle Endithanda
Nazi izinto endizenzayo abonakala ezixabisa:
UGoogle uthande xa ndibeka isihloko sam senqaku kwiphepha lam.
UGoogle uyithandile xa ndihlaziya ifayile yam .htaccess ukuze indawo yam ihlale isiya ku-http: //martech.zone endaweni ye-http: //dknewmedia.com naxa ndimxelela Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle ukuba ndiyithandile i-www.
UGoogle wayithanda xa ndathiya ibhlog yam ndisebenzisa amagama aphambili (ukuthengisa, itekhnoloji, ibhlog) endithetha ngayo kwizithuba zam rhoqo.
UGoogle uyithande xa ndimxelela into endithethe ngayo.
UGoogle uyithande xa ndimxelela eyona nto ibaluleke kakhulu kwiphepha lam kunye nento ebingasebenzisi iithegi zentloko.
UGoogle uyithande xa ndimxelela ukuba indawo yam ihlelwe njani kwaye ungayifumana phi yonke into usebenzisa eyam iirobhothi.txt kwaye Sitemap.xml iifayile.
UGoogle uyathanda ukuba ndibeka umxholo omtsha mihla le.
UGoogle uyathanda ukuba ndibeke izimvo kwiiblogi kuyo yonke indawo kwaye ndishiye igama lam nedilesi yewebhusayithi.
Indlela uGoogle andibonisa ngayo uthando
Andazi ukuba uGoogle uthanda ntoni ngaphezulu okanye ngaphantsi - kodwa ndiyazi ukuba uyandithanda. Ndiyazi njani ukuba uGoogle uyandithanda? Qhubeka umbuze ngokwakho!
Ngamanye amaxesha ndixoka kuGoogle, kodwa uyandithanda.
Ngoku, uyazi ukuba xa uxoka kwintombi yakho, kwaye kuya kufuneka uqhubeke uxoke ubuxoki obunye kwakhona? Kodwa awuxeleli mntu malunga nobuxoki… bubuxoki nje phakathi kwakho naye. Ndifuna ukubonisa ubungqina bokuba ngamanye amaxesha amantombazana ayathanda xa uxoka. (Inokwaziwa njenge umkhwa omnyama).
Kudala-dala, bekukho ifayile ye- enkulu yokwenza malunga nokufumana "uluhlu". Ndifuna ukungqina, ngokusemthethweni, ukuba nabani na angangena kuluhlu. Kuya kufuneka ujonge ngononophelo kwintloko yebhlog yam ukuze ubone ukuba ndingaze ndibekwe njani kwinqanaba eliphezulu "Uluhlu". Nantsi umkhondo:
intengiso, uphuhliso, igama lokushicilela kunye netekhnoloji yebhlog ngokuthi douglas karr> span style = "bonisa: akukho">, uluhlu lweeblogger> / span>.
Awunakuyibona… kodwa intombi yam entsha iyayibona! Kwaye uyandithanda. 😉
QAPHELA: Ndisusile isicatshulwa esifihliweyo kwintloko yam. Ndifuna ukubonisa ubungqina kodwa ngokuqinisekileyo andifuni kususwa kwisalathiso sikaGoogle!
tags: I-google webmastersGoogle +iirobhothi.txtSEOeKhayaxml imephu yendawo
Ukufuna: Isixhobo sokujonga kuqala nge-imeyile
Amazwe angama-97, ama-97 ayamkela, 97 enkosi!
Meyi 3, 2007 kwi-7: 47 PM
I-ROFLMAO-yoyikisa kodwa ihlekisa kunesihogo 🙂
Meyi 4, 2007 kwi-7: 31 AM
Enkosi Steven! Ndonwabe ngayo… naye… naye.
Meyi 3, 2007 kwi-11: 59 PM
Oko kuhle kakhulu. =]
Meyi 4, 2007 kwi-12: 07 AM
Ndiyathemba ukuba uyaziqhenya ngawe, Doug! Ndichithe iyure enesiqingatha yokugqibela Abaphathi beWebhu kaGoogle.
Meyi 4, 2007 kwi-7: 30 AM
Hayi… sukuphambanisa kakhulu nentombazana yam! Andifuni ukuba andikhohlise!
Meyi 4, 2007 kwi-2: 25 AM
Ndiyavuya ukukubona ufumana abantu abaninzi kuGoogle. Ndikwindawo efanayo okoko ndaphumeza iingcebiso ze-SEO okwethutyana. Unxibelelwano olwenziweyo luluhle. Ndilisebenzise icebo lakhe okwethutyana kwaye liyasebenza, ixesha!
Ndifumana malunga ne-50% yetrafikhi yam kuGoogle 🙂
Meyi 4, 2007 kwi-7: 32 AM
Ndiyamangaliswa yonke imihla ndijonga kwakhona izibalo zam!
Meyi 4, 2007 kwi-6: 50 AM
Umfazi wam ubonakalisa ingqumbo ngexesha lam kunye nekhompyuter yam kaDell- "uDella" ligama lokhuphiswano- kodwa kuvakala ngathi uGoogle angayinto entle yeelekese!
Meyi 4, 2007 kwi-7: 34 AM
UDella uvakala emhle kancinci kuneGoogla. Ndicinga ukuba uGoogla ungaphezulu kwe-gal egcweleyo-kodwa ndiyamthanda. 😉
Meyi 4, 2007 kwi-5: 13 PM
Um, ndiyazi ukuba uyayithanda intombi yakho kwaye konke kodwa akufihli mbhalo Izikhokelo ze-webmaster zikaGoogle?
Meyi 4, 2007 kwi-7: 11 PM
Ewe… yiyo loo nto ndiyisusileyo. 🙂
Uyilo lwewebhu lweMN
Meyi 5, 2007 kwi-12: 23 AM
Intle! Ndiyayithanda into yokuba "intombi yakho" sisixhobo sobuchwepheshe! 🙂
Meyi 5, 2007 kwi-9: 45 AM
Mhlawumbi imigangatho yam iphezulu kakhulu, MN! 😉
Meyi 5, 2007 kwi-7: 20 AM
Ndifundile amagqabantshintshi akho kwiwebhusayithi ekhutshiweyo malunga nokuguqula amaphepha akho esitayile kwimark semantic. Ndibona ithuba elifanelekileyo lokuthengisa lokuba ukhulule umxholo we-WP onamathela kuyo yonke imithetho ye-markup 😉
Meyi 5, 2007 kwi-8: 19 AM
Mhlobo, ulungile! Ndicinga ukuba yintengiso enkulu… Imixholo yeWP elungiselelwe i-SEO. Ndinqwenela ukuba ndibenexesha ezandleni zam!
Meyi 13, 2007 kwi-5: 07 PM
UGoogle uvakala kamnandi. Ngaba unomdade? Yhu, ndiphantse ndalibala ukuba sele nditshatile!